Ink azo ovaina: Marketing amin'ny mailaka amin'ny fotoana tena izy, manokana ary voasedra | Martech Zone
Ink azo ovaina: Marketing amin'ny mailaka amin'ny fotoana tena izy, manokana ary voasedra
Zoma, Aogositra 16, 2013 Alakamisy, Aogositra 15, 2013 Douglas Karr
Mijanona ny ankamaroan'ny sehatra mailaka… rehefa miala amin'ny mpamatsy azy ny mailaka dia tsy misy fomba hanovana ny atiny. Mampalahelo anefa izany satria mety hitranga ao anatin'izany banga izany ny hetsika azo raisina. Angamba orinasa ecommerce ianao ary tsy manana tahiry intsony amin'ny entana. Tianao ve ny olona hanokatra sy hanindry raha tsy hahita ny vokatra?
Angamba ianao manandrana antso-to-hetsika vitsivitsy ary mamantatra izay tarihin'ny tarehimarika indroa amin'ny taha-tsindry, azonao atao ve ny manavao ny CTA amin'ny mailaka ho an'ireo miverina aminy na tsy nanokatra azy mbola? miaraka Sehatr'i Movable Ink, mailaka lasa mailaka ary mamaly amin'ny fotoana tena izy. Ny sehatra mailaky ny mailaka mailaka ataon'izy ireo dia manome anao fahaizana manova mavitrika ireo hafatra ao anaty boaty rehefa efa nalefa izy ireo, manatsara ny fifandraisany, ny firosoana ary ny famerenam-bola.
Ahoana ny amin'ny fampidirana ny media sosialy sy ny mpanaraka azy amin'ny fotoana tena izy ao anatin'ny atin'ny mailaka? Ny sehatra marketing mailaka Movable Ink dia ahafahanao manamboatra sy manavao ny atiny mailaka ao anaty boaty.
Ireto ny sasany mampiavaka ny Sehatra Ink azo ovaina:
Votoatiny mivantana - Atsofohy ao anaty tranonkalanao ny atiny mivantana, sintomy RSS ary API misakafo anaty mailaka, asehoy mivantana ao anaty boaty ny horonan-tsary, ary alaivo ny hetsika manokana ataon'ny fitaovana (oh: fametrahana sy fanombohana ny fampiharana finday)
teny manodidina - Mikendry atiny mailaka amin'ny fotoana, toerana, fitaovana ary na ny toetr'andro aza.
Data momba ny tantara - Mampiasà lamina sy fironana hanatsarana ny maha-zava-dehibe azy. Fanapahan-kevitra an-dalambe mifototra amin'ny tahirin-kevitra momba ny demografika, ny fividianana taloha ary ny data momba ny fitondran-tena. Ampidiro miaraka amin'ny tahiry antoko fahatelo sy fitaovana fandrefesana ny mpihaino.
Analytics - Ny metrika mandroso miaraka amin'ny fahitana ny halavan'ny famakiana, sokafana amin'ny alàlan'ny fitaovana, toerana misy ny mpandray ary maro hafa. Midira amin'ny tatitra an-tserasera amin'ny Internet na amin'ny alàlan'ny mailaka mivantana.
Optimization - Manaova fitsapana misaraka A / B ary manatsara ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fandefasana. Misafidiana famoronana mamorona mifototra amin'ny firosoana amin'ny fotoana tena izy.
Social - Atsofohy ao anaty mailaka ny Facebook, Pinterest, Twitter, ary Instagram mivantana. Ampitomboy ny fahamendrehana sy ny fahatokisana amin'ny alàlan'ny sary manokana.
Tags: ab testingmailaka mavitrikafitsapana mailakaFacebookInstagramranomainty mihetsikamailaka namboarinaPinterestmailaka tena izyTwitter
Mixpanel: Analytics manokana, an-tarihin'ny hetsika